Homeसमाचारराजेश हमाल दम्पतीको यस्तो भिडियो कसरी बाहिरियो ?(हे’र्नुहोस् भिडियो)
February 20, 2021 admin समाचार 4739
महानायक राजेश हमाल उमेरले आधा शता’ब्दी नाघिसकेका छन् । विवाहको स’वालमा सधैँ चर्चामा आएका महानायक हमालले उमेर ढल्किएपछि मधुसँग विवाह गरे । अहिले भने कहिले बच्चा पाउने भनेर उनलाई धेरैले प्रश्न तेर्सा’उने गरेका छन् । उमेरले आधा शताब्दी नाघिस’क्दा पनि महानायक हमाल आफूलाई सधै जवान ठान्छन् । कसैले अहिले’को उमेर सोध्यो भने भन्ने गर्छन्, ‘२५ वर्ष पुगेपछि गन्नै छोडिदिएँ ।’ सार्वजनिक कार्यक्र’ममा जाँदा टिपटप भएर पुग्ने भएकाले उनको उमेर अ’नुमान गर्न पनि गाह्रै हुन्छ ।
तर, हमालको अनु’हारमा बुढ्यौलीका चिन्हहरु देखिन थालिसकेका छन् । जस्तो कि उनी आफैंले हालै फेसबुकमा सार्व’जनिक गरेको तस्वीरहरुले पनि राजेशको उमेर छि’प्पिँदै गएको संकेत गर्छन् । होम क्वारेन्टाइनमा रहँदा खि’चेका तस्वीर तथा भिडियोमा राजेशको जुँगा दारी लामा छन् र सेतै फुलेका छन् । उनै महानाय’कको व्यक्तिगत भिडियो अहिले समा’जिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ । श्रीमति मधुसँग रोमान्स गर्दै गरेको भिडियो बाहिरिएपछि अहिले उक्त भिडि’योले चर्चा बटुलिरहेको छ । महानायक ह’माल थरिथरि क्रियाकलाप गर्छन् घरभित्रै । उनले आफ्नी श्रीमती मधु भट्टराईसित रो’मान्टिक समयकोे भि’डियो पनि बाहिर ल्याएका छन् ।
जहा उनि श्री’मतीसँग वा’ईन खादैँ रो’मान्टिक हुँदै नाचेका छन् भने नया वर्षको सुभकामना पनि दिएका छन । केहि समयअघि बाहिरीएको उक्त भिडियोमा राजेश र मधु आफ्नो व्य’क्तिगत समय बिताइ’रहेका छन् । वा’ईन खा’दैँ म’स्ति गरेको भिडियो राजेश हमाल आफैँले सार्व’जनिक गरेपछि बुढेसकालको मायामा रमाइलो भन्दै धेरैले ठ’ट्यौलि कमेन्ट गरेका छन् । जे होस्, बु’ढेसकालमै विवाह गरेपनि महानायकको दाम्पत्य जिवन सु’खद र रमाइलो देखिन्छ । महानायक राजेश हमा’लले धेरै चलचित्र’हरुमा श्रीमान वा प्रेमी बनेर अभिनय गरेका छन् र धेरै रो’मान्टिक सिनहरु दिएका छन् ।
वास्तवित जीवन’मा चाहिँ उनी कति रो’मान्टिक होलान् ? विवाहको ५ वर्षपछि महानायक हमालले आफ्नी पत्नी मधुसहित टेलि’भिजनमा पहिलो अन्तरवार्ता दिए । हिमालय टेलिभिजनमा आइतबार आउने कार्यक्रम जीवनसाथीको पहिलो एपि’सोडमा उनीहरु प्रस्तुत भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा हमालको प्रस्तुति हेर्दा लाग्यो कि उनको दा’म्पत्य जीवनमा रोमान्टिक होइन, बोरिङ रहेछन् । पहिलोपटक आफूहरुको बैवाहिक सम्वन्ध’बारे खुलेको यो जोडीको फरकफरक स्वा’भाव देखियो । हमाल स्वयम्ले आफू ‘विवाह र घर व्यव’हार गर्ने खालको व्यक्ति नभएको’ बताए ।
मधु भने सम’झदार लागिन् । पहिलोपटक टेलिभिजनमा यसरी आफ्नो दाम्पत्य सम्वन्धबारे खुलेकी उनले राजेशलाई आफ्नो आदर्श बताइन् । तर, उनका केही स्वभा’वप्रति गु’नासो पनि गरिन् । हरेक पत्नीहरुले चाहन्छन् आफ्नो जन्मदिनलाई पतिले विशेषरुपमा लेओस् । पतिलाई ‘आज मेरो जन्मदिन हो है’ भनेर सम्झाउनुपर्दा उनलाई पक्कै पनि खुशी लाग्दैन । तर, मधुको जन्मदिन कहिले हो भन्नेसम्म हमाललाई थाहा रहेनछ ।कार्य’क्रम प्रस्तोता माल्भिका सुब्बाले दुबैलाई एक’अर्काको विषयमा ५/५ प्रश्न सोधेकी थिइन् । जसमा मधुले ५ मध्ये ४ प्रश्नको सही उत्तर दिइन् ।
राजेशले चाहिँ ५ मध्ये २ प्रश्नको गलत उत्तर दिए भने एउटा कागतालीमा मिलाए । माल्भिकाले ‘मधुजीको जन्मदिन कहिले हो ?’ भन्ने प्रश्न हमा’ललाई सोध्ना’साथ मधुले भनिन्, ‘यो पक्कै उहाँलाई थाहा छैन ।’ नभन्दै हमालले भन्न सकेनन् । निकैबेर घोत्लिएर भने, ‘आई थिंक नोभेम्बरमा हुनुपर्छ । ७ तारिख हो कि ?’ मधुले भनिन्, ‘अहँ होइन ।’ तर, श्रीमानले आफ्नो जन्म’दिन बताउन नसक्दा मधुले चित्त चाहिँ दुखाइनन् । ‘उहाँलाई यस्ता कुरा थाहै हुँदैन’ भनेर बचाऊ गरिदिइन् । सो कार्य’क्रममा राजेश हमालले मधुभन्दा अगाडि आफ्ना धेरै विदेशी महिलासँग अफेयर रहेको ग’र्वसाथ बताए ।
‘नायिका’हरुसँग त मेरो भएन । तर, विदेशीहरुसँग भयो । उनीहरु’सँगको सम्वन्ध बिहे गर्नका लागि थिएन । तर, मैले पहिले अफेयर गरेका केटीहरुभन्दा मधु एकदम सोझी थिइन् । उनीसँग सम्वन्ध राखेपछि बिहे नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ हमालले सुनाए । मधुले थपिन्, ‘म त अहिले पनि सोझी नै छु । उहाँले आफ्नो विगतका सम्वन्धबारे मलाई भन्नुभएको छ ।’ हरेक महिलाहरु आफ्नो श्रीमा’नबाट प्रशंसाका शब्द सुन्न आतुर हुन्छ’न् । यसमा पनि मधु अभागी देखिइन् । पतिले कहिल्यै मुख खोलेर प्रशंसा नगरेको उनले बताइन् । र, हमालले पनि यो स्वी’कारे ।
‘मेरो स्वा’भाव नै त्यस्तो छैन । मेरो व्यवहारबाटै माया व्यक्त हुन्छ । मेरो आँखाबाटै व्यक्त हुन्छ । मुखले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ हमालले भने । त्यसपछि मधुले भनिन्, ‘तर कम्प्टमेन्ट सुन्न त कसलाई मन लाग्दैन र ? म सँधै तपाईंको आँखा’मा हेरेर बस्न पनि त भ्याउँदिनँ । कहि’लेकाहीँ त प्रशंसा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिहाल्छ ।’ राजेशले आफूलाई कहिल्यै मुख खोलेर ‘आई लभ यू’ नभनेको समेत मधुले सुनाइन् । ‘मैले आई लभ यू भनिरहनु पर्छ र ?’ राजेश भन्दै थिए । मधुले भनिन्, ‘हजुर’को मुखबाट यो शब्द पहिलोचोटि सुन्दैछु ।’
उनीहरुलाई एकअ’र्कासँग बिताएको सबैभन्दा मीठो पलका बारेमा सोधियो । मधुले राजे’शसँग लामो यात्रा गरेका क्षणहरु आफ्नो लागि अविस्मरणीय रहेको बताइन् । ‘घरबाहिर घुम्दा उहाँको अर्कै व्यक्तित्व देख्छु । निकै बिन्दास बन्नु हुन्छ । त्यो व्यक्तित्व मला’ई मन पर्छ । कहिल्यै यो यात्रा नटुंगि’योस जस्तो लाग्छ,’ मधुले भनिन् । राजेशले भने मधुसँगको मीठो पलबारे सोध्दा कुनै क्षण उल्लेख गर्न सकेनन् । बरु भने, ‘मलाई पनि घुम्न मन पर्छ । म पहिलेदेखि नै विदेश घुमिरहेको मान्छे हुँ । खासगरी थाइल्यान्ड मन पर्छ ।’राजेशले आफ्नी पत्नी’लाई समय चाहिँ कत्तिको दिन्छन् त ? यो प्रश्नमा मधुले भनिज्, ‘उहाँ धेरै विजी होइसिन्छ ।
प्राय ट्राभ’लमै हुनुहुन्छ । तर, फुर्सदको समयचाहिँ मसित नै बिताउनुहुन्छ । त्यसैले मेरो कुनै गु’नासो छैन ।’ कार्यक्रमको अन्त्यमा राजेशलाई पत्नीको हात समातेर केही रो’मान्टिक शब्द’हरु भन्न लगाइन् माल्भिकाले । तर, राजेशले मन गरेन् ।‘यस्तो कुरा मलाई मन पर्दैन । मैले धेरै फिल्म’हरुमा रोमान्टिक डा’इलग बोलेको छु । त्यसैले ए’क्टिङ गरेको जस्तै लाग्छ,’ उनले भने । तर, माल्भिकाले कर गरेपछि उनले पत्नीको हात समाते । मधुले निकै लजाएर हात दिइन् । तर, हमालले रो’मान्टिक संवाद बोल्नु’को साटो उ’टपट्याङ गीत गाउन थाले ।
आफ्नो मन पर्ने गीत भन्दै उनले गाएको गीत थियो: तिम्रो माया लाग्छ है साइँ’ली सम्झन्छु छिनछिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन, आज त मैले भातै र खाएँ तिहुन गा’भाको, तिमीले माया के लाउँथ्यौ साइली म’जस्तो जाभाको, सेतो र चोली रातो र चोली उनैले सिएको, यो गीत मैले गाएको होइन सम्झाइ’दिएको । यहि गीतमा रमाइलो गरेको भिडियो महाना&यकले सार्वजनिक गरेका थिए । ‘तर, म त साइँली होइन, जेठी भनेको भए हुन्थ्यो,’ मधु भन्दै थिइन् । – इताजा खबरबाट
August 23, 2021 admin समाचार 2457
नर्भिक अस्पतालमा उप`चाररत अभिनेत्री निशा घिमिरेलाई भेट्न यतिबेला विभिन्न कलाकार,गायक तथा अन्य विभिन्न व्यक्तित्त्वहरू गइरहेका छ्न्।क’तिपयले सहयोग सहित संकलन गरेर उनको उप`चारमा सहयोग गर्दै आइरहनुभएको छ भने कतिपयले उनको लागि भविष्यमा अ’क्षय कोष स्थापना गरिदिने
March 28, 2021 admin समाचार 3780
नायक पल शाह पछि’ल्लो पुस्ताका लोकप्रिय अभिनेता हुन् । पूजा शर्मा, आँचल शर्मा, करिश्मा मानन्धर लगाय’तका सुन्दरी अभिनेताहरुलाई नेपालको सफल नायिका मान्छन् पल शाह । कुनै सम’यको चर्चित जोडी पल र आँचलको जोडीलाई आँचलको विबाहपछि
May 9, 2021 admin समाचार 3715